Meydka wiil madaxa laga gooyey oo saaka lagu arkay degaanka Lafoole ee duleedka magaalada Muqdisho
Degaanka Lafoole oo ka tirsan degaanada ku teedsan wadada xiriirisa magaalada Muqdisho iyo degmada Afgooye ee gobolka Sh/hoose ayaa waxaa saaka lagu arkay meydka qof dhalinyaro ah oo madaxa laga gooyey.
Dadka ku nool degaanka Lafoole oo ka argagaxay markii ay saaka meydkan arkeen ayaa isugu soo baxay goobta la soo dhigay, iyagoo isku dayaya iney aqoonsadaan ka dib markii la waayey cid garata.
“Wiilkan gowrac ayaa lagu dilay, xalay saqdii dhexe ayaan qiyaaseynaa in goobtan la soo dhigay, waxaana lagu soo dilay meelo kale, ma jirto cid aqoonsatay dadka degaankana waa argagaxsan yihiin” ayey tiri hooyo magaceeda ku soo koobtay Xaawo oo ka mid ah dadka degaanka.
Illaa hadda ma cadda cida ka dambeysay dilkan wiilkan dhalinyarada ah loo geystay iyo sababta loo dilay, balse dadka degaanku ayaa sheegaya iney qorsheynayaan iney aasaan isla saaka, iyagoo haatan wada qaban qaabo arintaas ku saabsan.
Maamulka dowlada ee degaanka lafoole ayaan ka hadlin arintan illaa hadda , mana ahan markii ugu horeysay ee meydad noocan ah oo siyaabo kala duwan loogu duwan loo dilay lagu arko magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda.